နောက်တဖန်ငါ့ကို ... ဒုတိယကမ္ဘာစစ်
မေးခွန်း နောက်တဖန်ငါ့ကို ... ဒုတိယကမ္ဘာစစ်
3 နှစ်ပေါင်း7နာရီအကြာက #278 by PAYSON
ဒါဟာနောက်တဖန်ငါ့ပါပဲ။ ကိုယ့် spitballin 'နှင့်အစဉ်အဆက်တစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပိုင်းလုပ်နေတာမှာကြိုးပမ်းမှုရှိခဲ့ရဲ့လျှင်အံ့ဩခဲ့သည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်ခေတ်ကနေမဆိုလေယာဉ်ပျံ၏ခံစားချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင် Mach2ကနေတိုင်းယခုပြီးတော့ချွတ် back မှတစ်ခုလုံးအသစ်သောအတွေ့အကြုံ, ပါလိမ့်မယ် - 3, နှင့်စောင်းနေသောကုန်းပတ်ပေါ်မယ့်အစားဆင်းသက် mucho / fasto ၏အဟောင်း / အကြီးပြားချပ်ချပ်ထိပ်ပေါ်မှာဆင်းသက်၏ခံစားချက်ကိုခံစား။ ယခုတွင်ငါသည်ငါတဦးတည်းသေးငယ်တဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရေတပ်ရှိခြင်းကိုခံစားမယ်လို့အဘို့။ (ယခုကြှနျုပျတို့ရှိသည် Corsair ပျော်စရာတွေအများကြီးပါပဲ။ ငါဆေးသုတ်အစီအစဉ်များများထဲမှတစ်သွန်းသတ္တုမော်ဒယ်ရှိသည်။ )
3 နှစ်ပေါင်း 1 နာရီအကြာက #288 by Gh0stRider203
ငါသည်ဤ၏မျက်နှာသာအတွက် 1000% ပေါ့!
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #297 by PAYSON
တထော PERCENT? !!!!!? wow, အိုင်တီ COMIN ငါတို့လမ်း 'နောက်တစ်ခုကသူဖြစ်ရမည်; -!]
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #328 by Gh0stRider203
yeah ငါအများအားဖြင့်အကြှနျုပျ၏ VA သို့များအတွက်ဂျမ်ဘိုပျံသန်း .... ဒါပေမယ့်ငါဒုတိယကမ္ဘာစစ် Birds ဂိမ်းကိုချစ်လုပျဆောငျ